Ikhaya > Iindaba > Iindaba zeshishini > Intshayelelo kwimveliso yeplastiki yekhaya
Iiplastikhi yimixube yepolymer, eyaziwa ngokuba ziiplastikhi okanye ii-resin, ezifakwe ipolymer ngokudityaniswa okanye ukuncitshiswa kwee-monomers njengezinto ezisetyenzisiweyo. Banokutshintsha ngokukhululekileyo ukwakheka kunye nemilo. Zenziwe ngee-resins zokwenziwa, iifillers, i-plasticizers, i-stabilizers, i-lubricants, i-colorants kunye nezinye izongezo.
IPolyethylene terephthalate (PET)
Amanzi amaminerali ngokubanzi kunye neebhotile zesiselo sekhabhon zenziwe nge-polyethylene terephthalate (PET), ngo-1946, i-United Kingdom yapapasha ilungelo elilodwa lomenzi lokulungiselela i-PET. Ngo-1949, ifomula yase-Bhritane ye-ICI yagqiba uvavanyo lokulinga, kodwa emva kokuba i-United States iDuPont Inkampani ithenge ilungelo lobunikazi, isixhobo semveliso sasekwa ngo-1953, kwaye imveliso yokuqala yezorhwebo yafezekiswa emhlabeni.
1, ukumelana neoyile, ukuxhathisa amafutha, i-enic acid, ukuxhathisa ukumelana nealkali, uninzi lwezinyibilikisi.
2, ukungafihli okuphezulu, ukuhanjiswa kokukhanya kunokufikelela ngaphezulu kwe-90%, iimpahla ezihlanganisiweyo zinomsebenzi olungileyo wokubonisa.
I-3, inokumelana nobushushu obuphantsi kakhulu, inokumelana -30â „ƒ ubushushu obuphantsi, kuluhlu lwe - 30â„ ƒ-60â „ƒ ukusetyenziswa.
4, irhasi kunye nokungena komphunga wamanzi kusezantsi, zombini ukuxhathisa igesi, amanzi, ioyile kunye nokusebenza kwevumba elikhethekileyo.
5, elubala eliphezulu, ukuvimba ukukhanya yelanga, kubengezela elungileyo.
Iibhotile zesiselo azinakuphinda zisebenze kwakhona ngamanzi ashushu, obu bushushu bunokumelana ne-70â „ƒ, iqondo lobushushu eliphezulu liya kunyibilika izinto eziyingozi, ezifanelekileyo kuphela iziselo ezishushu okanye iziselo ezibandayo, ulwelo lobushushu obuphezulu okanye ukufudumeza kulula ukukhubazeka, kukho izinto eziyingozi umzimba womntu wanyibilika.
Okulandelayo:Intshayelelo PC iimveliso zeplastiki